Mụta otu esi echekwa na Forex | Azụ ahịa dị ka PRO! - Mụọ 2 Trade February 2021
Etu esi enweta ahihia na Forex - ahia dika PRO! 2021
Ohere na ị nụrụ nke Forex. Emechakwa, ọ bụ ahịa ahịa mmiri kachasị nwee na mbara ala. Na kwuru, hedging na Forex bụ ụzọ dị irè dị irè isi na-egbochi ihe ize ndụ nke ọnụahịa na-agbanwe na mpaghara ahịa a na-agbanwe agbanwe.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị na-achọ usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ, ị ga-akwụ ụgwọ ego nwere ike ịbụ ya. Iji nye gị ntakịrị ihe ọmụma gbasara isiokwu a, anyị ga-agabiga ihe niile site na etu esi agba oke na Forex na usoro isi na ngwaọrụ ị nwere ike iji.
Anyị ga-enwukwa ọkụ banyere otu ị ga - esi ahọrọ ezigbo onye na - ere ahịa na - enye gị ohere igbochi ego na gburugburu ebe nchekwa.
Kedu ihe na-egbochi?
Na nkenke, 'ngere' bụ ihe ndị ahịa na-eme ka ha wee gbochie iyi egwu nke ọnụahịa na-aga n'ihu. Site n'ime nke a, ị na-echebe ọnọdụ gị. A na-ahụta nchedo ahụ a kpọtụrụ aha dị ka ihe ngwọta dị mkpirikpi.
Onye na-ere ahịa na-arụkarị ya n'ihi ntụgharị na ahịa ahịa ma ọ bụ akụkọ akụkọ buru ibu nke nwere ike imetụta ahịa ego n'ozuzu ya.
Izu ego na-abịa site n'aka ndị ahịa na-anwa iwepụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ belata njedebe nke ego mba ọzọ na-aga n'ihu na ịzụ ahịa ego. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ ịgbachitere n'ọtụtụ ahịa dị iche iche na ebumnuche iji dozie nsogbu ndị nwere ike
Ejiri ulo oru ndi isi na-eji ahihia na ndị ahịa ụbọchị niile. E nwere ụfọdụ azum na ngwaọrụ dị iche iche ị nwere ike iji bido ịkpa oke ma anyị ga-akọwa ntakịrị ihe na nke ọ bụla n'oge na-adịghị anya.
Gịnị kpatara ndị ahịa ji agba Forex?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị ahịa ji agba oke Forex. Ọ na-abụkarị ụzọ nke ịmepụta ụgbụ nchekwa megide mgbanwe ọnụego ego. Dịka ọ bụla n'ahịa ahịa ọ bụla, ọ nweghị ezigbo ụzọ nke ịmepụta gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe egwu. Site na nke ahụ, ịgọnahụ na usoro ịgba mbọ nwere ike inye aka belata ma ọ bụ opekata mpe ịchịkwa mfu gị.
N'ihi eziokwu ahụ Forex ahịa dị iche iche site na okike, igbochi ego dị iche na iche na ahịa ndị ọzọ. N'eziokwu, ụfọdụ ndị ahịa na-eche na ọ baghị uru ịgbachitere ma ọ ga-aka mma ịnabata ọdịdị azụmaahịa azụmaahịa. Mgbe ahụ enwere ụfọdụ ndị ga - ahọrọ ibelata ihe egwu ha n'ahịa dị egwu a.
Nke bụ eziokwu bụ - belụsọ ma ị nwere obi ụtọ ịnabata na azụmaahịa azụmaahịa nwere ike ịdị njọ, mgbe ahụ ị nwere ike iji oke oke dị ka ụzọ iji mezie mkpụmkpụ oge dị mkpirikpi. Ọ bụrụ n’inwee mmetụta na uru ọnụọgụ ego ga-adị ntakịrị, tupu ịlaghachi azụ, ịnwere ike itinye oke na usoro gị.
Ọzọ, anyị ga-agba gị ọsọ site na ụfọdụ atụmatụ na ngwa ndị ewu ewu nke ndị ahịa na-agba mbọ na mbu - yabụ ị ga-azụ ahịa dị ka pro n'egbughị oge!
Atụmatụ Izu Ike
Ugbu a ị maara ihe ọ pụtara ịgbachi na ọnọdụ nke azụmaahịa azụmaahịa, anyị abanyela n'uju banyere ụzọ dị iche iche ị ga-esi gbaa ahịa na ahịa ego.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ kachasị ewu ewu na Forex maka iji taa.
Mgbe ụfọdụ a na - akpọ ya 'ihe mkpuchi dị mfe', nke a na-abụkarị mgbe onye na-azụ ahịa mepee ọnọdụ abụọ dị iche na ọnọdụ na-aga n'ihu. Nke a ga-abụ otu ogologo (ịzụta iji) na otu mkpụmkpụ (ere iji) - ya mere na ha na-aga na esemokwu ntụziaka.
Nke a bụ ihe atụ nke ihe mgbochi dị ka:
Ka anyị kwuo na ịnweela ọnọdụ dị mkpirikpi na ụzọ ọhụụ dị ka AUD / USD
Mgbe ahụ akụkọ gbasaa nke mmemme nke ị chere ga-emetụta USD
Kpebiri imeghe ogologo ọnọdụ n'otu ụzọ ahụ
'Ve na-agbazi ahịa azụmaahịa gị
Uru ụgbụ gị na oke ogige ga-abụ efu, yabụ ị na-edobe ọnọdụ izizi gị na Forex ahịa. Nke a bụ ka ị dịrị njikere maka mgbe ụdị adịghị mma.
Ọ bụrụ na ị gbaa ogige - ị nwere ike ị nweta uru na azụmaahịa nke abụọ mgbe ahịa na-aga n'ihu azụmaahịa mbụ gị. Ọ bụrụ na ị kpebiri na ị gaghị egbochi ọnọdụ ahụ - ị nwere ike mechie azụmahịa gị ma were ọnwụ na agba.
Okwesiri ighota na obughi onye ahia ahia obula ga-ekwe ka uzo ozo, ya mere o gha ahọrọ ịhọrọ ntaneti.
Otutu ego Ego
Strategyzọ ọzọ ị ga-esi gboo mkpa gị bụ ịhọrọ ụzọ abụọ dị iche iche e si echee ego ka ‘a na-emekọrịta nke ọma’ ma were ọnọdụ mmegide na ụzọ nke ọ bụla.
Di na 'nmekorita' na-egosiputa onu ogugu otu ego si eme dika oge. Karịsịa, ma ha agala na ntụpọ ndị ọzọ, otu ụzọ ahụ ma ọ bụ enweghị usoro.
A na-eji ọnụọgụ mmekọrịta dị ka usoro ihe atụ na nke a, iji chọpụta ike nke mmekọrịta dị n'etiti ego abụọ na-agbanwe agbanwe. Egosiputara n'usoro akara site na -1 rue +1.
Nke a bụ ihe atụ nke ihe mmekọrịta dị na oghere oghere ga-adị ka:
Ezi mmekọrịta: Ka anyị kwuo na mmekọrịta bụ + 1. Nke a gosipụtara na ụzọ abụọ ego ga-aga n'otu ụzọ ahụ ọtụtụ oge. Positivefọdụ mmekọrịta dị mma gụnyere AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD, na NZD / USD. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-eji AUD / USD na EUR / USD. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe - ọ bụrụ na AUD / USD na-ere ahịa elu, mgbe ahụ EUR / USD ga-aga otu ụzọ ahụ.
Ihe na-adịghị mma: N'aka nke ọzọ, ka anyị jiri USD / CHF na USD / CAD. N'ihe atụ a, mmekọrịta nke -1 ga-egosi na USD / CHF na USD / CAD ga-agagharị na usoro mmegide ọtụtụ oge. A atụ ole na ole nke na-adịghị mma mmekọrịta ego na abụọ bụ USD / JPY, USD / CAD, na USD / CHF. Dịka ị pụrụ ịhụ, USD bụ isi ego.
Ka anyị were ya na ị gafeela GBP / USD, mgbe ahụ ị ga-ekpebi imeghe ogologo ọnọdụ na EUR / USD iji kpuchie ihe egwu USD gị.
Ọ bụrụ na paụnd mere dobe na dollar US, mgbe ahụ ọnọdụ ogologo ahụ na EUR / USD ga-efu. Agbanyeghị, ọ ga-ewedata ya site na uru na ọnọdụ GBP / USD gị. N'ụzọ bụ isi, ọ bụrụ na USD dara n'oge a, ọghọm ọ bụla na ọnọdụ ahụ dị mkpirikpi ga-agbagha site na ogige gị.
Ighapu otutu ego abuo ekwesighi ka e were ya, dika enwere ihe ojoo di. N'ihe atụ anyị, anyị kpuchitere ihe egwu anyị na USD, mana n'aka nke ya, anyị kpughere onwe anyị na obere ihe egwu na EUR, na ogologo ihe egwu na GBP. Ihe bụ, enweghị nkwa ọ bụla maka atụmatụ azụmaahịa ọ bụla. Site na nke ahụ, ọ bụrụ na ị belata ihe egwu gị n'ụzọ dị otu a, mgbe ahụ ị ga-ahụ uru.
Ihe kachasị dị iche n'etiti 'eburu ụzọ na-echekwa' na 'ọtụtụ mkpuchi ego' bụ na mgbe ị na-egbochi ọtụtụ ego - otu ọnọdụ nwere ike ịmepụta uru karịa uru ndị ọzọ. Site na ngere, ihe ngbata ga-agarịrị efu.
Nhọrọ nhọrọ na-enyere gị aka ịzụ ahịa otu FX na ọnụahịa a kara aka tupu oge a kara aka agafeela. N'ihe banyere iji ihe mkpuchi ihe, nhọrọ bara ezigbo uru. Ihe kpatara ya bụ na ha na-enye gị ohere iji belata ihe egwu gị yana naanị ị ga-akwụ ụgwọ maka nhọrọ 'adịchaghị' n'onwe ya.
Nke a bụ ihe atụ nke usoro atụmatụ ịchụ oke ụzọ:
Have nwere usoro ịzụta na GBP / USD na ọnụahịa nke 1.32
Agbanyeghị, ị na-ebu ụzọ na mbelata na mberede
Maka nke a, ị kpuchitere ihe ize ndụ gị site na iji nhọrọ etinye na 1.32, nke ga-agwụ mgbe ọnwa 1 gachara.
N'ihe atụ anyị dị n'elu, ọ bụrụ na site na oge ngwụcha ụbọchị abata ụgwọ ejirila ala karịa 1.32 - ọnọdụ gị ogologo ga-ahụ nfu, mana nhọrọ gị ga-enweta uru na itule ihe egwu ahụ.
Ọ bụrụ na ọnụahịa GBP / USD gafere 1.32, mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ọnụahịa nke ntinye nhọrọ (adịchaghị).
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na ọ bụghị nyiwe ntanetị niile na-enye ndị ahịa nhọrọ, yabụ ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị nwere mmasị na ya, ị ga-ahụrịrị na ikpo okwu na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ụzọ ahụ.
Izu Forex - Ngwaọrụ
N'ihe banyere ọrụ, enwere okwu ole na ole ị ga-ahụ mgbe niile mgbe ị na-egbochi iwu na Forex. Dị ka ndị dị otú a, anyị ejirila nkọwa nke ụfọdụ ihe eji eme ihe mkpuchi ọnụ.
Akpaaka Forex Hedging Robot
Iji sistemụ azụmaahịa akpaghị aka mgbe ọ na-egbochi oke mgbochi nwere ike ịba uru. Nke a bụ ikpe kachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọhụụ ma ọ bụ na ịchọrọ ịlaghachi azụ. Ohere inweta bụ nụla nke mgbanaka azụmaahịa azụmaahịa, akpọkwara Forex EAs (Ọkachamara Advisors). Ha enweela ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke oge - ya bụ n'ihi nkwenye ndị a ma ama na-efe efe.
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ahụ - robot azụmaahịa na-akpaghị aka na-azụta ma na-ere na nnọchite gị site na iji algorithms ọkaibe. Nke ahụ pụtara na ọ nweghịzi mkpa iji ọtụtụ ọnwa mụọ etu esi agụ eserese na nyocha nyocha. Kama nke ahụ, bot na-eme ya niile ma na-enye gị ohere ịzụ ahịa 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. N'ihe banyere mgbatị mgbatị mgbatị, a ga-arụ ya n'ụzọ dị otú a nke na-eme ka ọ zuo oke maka njikwa ihe egwu.
Yabụ, ọ ga-ikpokọta na-emekarị nchọpụta, ịzụ, ere, na-emeghe multiple ọnọdụ ozugbo. Ọ dị ka mgbe ị gbara onwe gị ogige, ndị Forex robot na-ezube ime ka ego gị na-asọ ma na-enye gị net nchekwa maka mgbe, ma ọ bụ ọ bụrụ, ihe a na-atụghị anya ya na-eme na ahịa azụmaahịa.
Na ụdị azụmaahịa a, belụsọ ma itinyela oke ma ọ bụ ịkwụsị usoro, onye na-ere ahịa ga-emechi ọnọdụ izizi. N'ikpeazụ, ahia ọhụrụ a ga - akagbu ya - nke a maara dị ka 'ịchụpụ'.
Nke a bụ ihe atụ nke 'ụgbụ':
Ka anyị kwuo na ị nwere usoro ịzụta na EUR / USD maka € 200
Mgbe ahụ ị ga-eme ihe sell 200 na-ere iji na EUR / USD (iji gbochie ya)
Ọnọdụ mbụ ga-emechi n'ihi na ị na-etinye usoro na-abụghị usoro
'Achọpụwo iwu gị'
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ma ị na-azụ ahịa Forex, ebuka, ọla siri ike, agbụ, ma ọ bụ klaasị ọ bụla maka okwu a - ị ga-emechi ọnọdụ mepere emepe mgbe niile site n'itinye onye ọzọ pụtara ìhè. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-achọ ịchọta onye na-ere ahịa azụmaahịa na-enye gị ohere ịnweta ma zụta ọnọdụ na-emeghe n'otu oge ahụ, n'otu ụzọ ego ahụ.
Ike imeghe bụ ọrụ ịzụ ahịa bara uru nke na-egbochi ndị na-ere ahịa ịchụpụ ọnọdụ gị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọrụ a pụtara na ị nwere ike imeghe ọnọdụ ọhụrụ - na ụzọ mmegide na nke azụmaahịa mbụ.
N'ihi ya, ị na-enwe ike ịmeghe ọnọdụ abụọ ahụ n'ime otu oghere ahịa - na otu akụ (ogologo na mkpụmkpụ).
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke 'imeghe oghe'
N'oge a, ka anyị chee na ị mepee ọnọdụ dị mkpirikpi £ 500 na AUD / NZD
Predict na-ebu amụma na AUD / NZD ga-ahụ ịrị elu ọnụahịa dị mkpirikpi
Ka anyị kwuo ugbu a mepee ọnọdụ buy 500 ịzụta na AUD / NZD (iji belata ọnwụ nwere ike)
N’ọnọdụ a, ndị na-ere ahịa na-agbanyekarị ọkwa gị abụọ. Yabụ dịka anyị kọwara n'elu, nke a pụtara na a ga-emechi ọnọdụ izizi gị. Agbanyeghị, ịhọrọ ịhọrọ 'n'ike', iwu gị abụọ ka ga-arụ. Ka o siri dị, nke a na-enye gị ohere ijikọ otu ụzọ ego abụọ.
Otu esi acho ihe ahia ahia
Fọdụ ndị na-ere ahịa anaghị ekwe ka mgbochi, yabụ ịchọta nke nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Anyị achịkọtara ndepụta nke usoro metrik iji leba anya mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa ga-ekwe ka ị gbaa ogige.
Rịba ama, ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na-echekwa onwe gị, ị ga-ahụ ọnụọgụ ise kachasị elu na njedebe nke ibe a. Ndị otu anyị na-azụ ahịa n'ụlọ anyị ejirila aka anyị chọpụta nke ọma na ọ ga-enye gị ohere ịme ego iji chebe ego.
Akwụkwọ ikike na iwu
Ọ dị oké mkpa na ị na-eme ka ọ bụrụ ihe kacha mkpa ịchọta onye na-ere ahịa nke ikike kwesịrị ekwesị na-achịkwa. Iji maa atụ, Financial Conduct Authority (FCA).
FCA na-achịkwa ma na-achịkwa nyiwe ọnụọgụ 60,000 na UK. Ijide n'aka na onye na-ere ahịa nwere ikikere dị mkpa ma a bịa n'ichebe ndị ahịa site na mpụ ego ma ọ bụ enweghị ego. Ọ bụghị banyere ichebe nghọta nke ndị ahịa na ịmepụta ohere ịme ego mara mma maka onye ọ bụla.
Onye ahia ọ bụla ị ga-ahụ ga-adị iche iche mgbe ọ bịara ụgwọ. Ebe otu onye na-ere ahia nwere ike ịkwụ ụgwọ ọrụ maka azụmaahịa ọ bụla, usoro ikpo okwu ọzọ agaghị enwe ọrụ - mana na-akwụ ụgwọ ụgwọ abalị na enweghị ọrụ.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ị na-ele anya nwere ụgwọ ọrụ dị elu nke etinyebere na azụmaahịa ọ bụla, mgbe ahụ ị ga-achọ ịtụleghachi ha maka mbọ ị na-agba.
Ka anyị kwuo na ị na-ere AUD / USD
Gị ore ahia chọrọ 0.8% ọrụ kwa ahia.
Ugbu a kwuo na ị ga - etinye £ 1,500
Gị ore ahia na-aga na-£ 12 mgbe ọnọdụ na-emeghe
Na-eche na ọnọdụ gị na-emechi emechi emechi-ị ga-akwụ ụgwọ ọzọ commission 12.
N'ihe atụ anyị, ọrụ na-eri ihe dị ukwuu na azụmaahịa ọ bụla ga - eme ka ị ghara ịnwe mgbidi. N'ezie, echiche nke ịdọ ogige abụghị iji nweta nnukwu uru, ọ bụ iji belata ihe ọghọm gị nke nnukwu ọghọm, site na ịhazi ya.
Obi dị m ụtọ na e nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ọkachamara na ndị na-achịkwa akara na oghere nke ga-enye gị ohere ịzụ ahịa kpamkpam n'efu!
The mgbasa bụ naanị ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụ ahịa na ire ere nke otu ụzọ FX - gosipụtara na pips. Ọnụ ọgụgụ nke pips dị ala karịa. Mgbasa ike na-adịkarị mma maka ndị ahịa, mana ọ bụ karịsịa ikpe ma a bịa n'okwu mkpuchi.
Iji nye gị ihe atụ nke ihe mgbasa ahụ nwere ike ịdị ka mgbasa 4 pip:
Ka anyị were ya na ị na-ere GBP / USD
Ọnụ 'Buy' bụ 1.1443
Na 'ere' ego bụ 1.1447
4 pips nwere ike ọ gaghị ada ụda dị ka ọtụtụ, mana na oghere azụmaahịa Forex, a na-ahụta ya dị oke ọnụ. Dị ka nke a, ọ ga-eme ka mgbochi forex enweghị isi.
Ọ bụ n'ihi nke ahụ ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa edepụtara na ibe a na-agbasa ihe na-erughị 1 pip na isi ego abụọ - nke bụ asọmpi n'ezie. Ihe ntanetị dị ka eToro na-enyekwa agbanwe na-agbasa. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, nke a pụtara na mgbasa na-agbanwe dịka ọnọdụ ahịa si dị.
Di na Nwunye Di iche
Mgbe ọ bịara na Forex, enwere ọtụtụ ụzọ abụọ ịhọrọ. Ihu á''``ma, gi Forex ore ga-enwe ezigbo nhá '' on rá '' offer na-enye maka gá''``- si umuaka na isi á '' zá '' ka exotics na abụrụ ego.
N'ụzọ na-akpali mmasị, naanị n'ihi na onye na-ere ahịa na-enye ohere igbochi, ọ pụtaghị na ha ga-ahapụ gị ka ị jiri usoro ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na ị gụchaa peeji a, e nwere atụmatụ akọwapụtara (dịka scalping) ị chọrọ ịnwale, jide n'aka na ụlọ ahịa gị na-enye ya ohere.
Ịkwụ ụgwọ na ịkwụsị
Ọzọkwa, ikpo okwu ọ bụla ga-adị iche. Imirikiti ebe ndị na-ere ahịa na-enye ndị ahịa ohere itinye ego site na iji usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche dịka kaadị akwụmụgwọ / debit, nnyefe ụlọ akụ, na e-wallets dị ka PayPal. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa ohere ịkwụ ụgwọ site na ụfọdụ cryptocurrencies dị ka Bitcoin, ọ bụ ezie na enyere ya, ọ bụghị dịka Visa.
Na isiokwu nke oge nhazi, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa ga-ahazi nkwụnye ego gị ozugbo. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ụzọ, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na ịdebe site na mbufe ego ọ ga-ewe ụbọchị iji banye na akaụntụ ahịa gị.
Ddọrọ ego dị mfe n'ọtụtụ nyiwe agbanwe, agbanyeghị, na-elele tebụl ego iji jide n'aka na agaghị akwụ gị ụgwọ dị oke ọnụ.
Nka na ụzụ Ngosipụta Nka na Nkuzi
Ndị ahịa n'ụwa niile na-a swearụ iyi site na njirimara ọrụ na ngwaọrụ iji nyere ha aka ịme mkpebi azụmaahịa.
Anyị edepụtara ụfọdụ ndị ọrụ aka na-ejikarị na mbara igwe:
Jiri ngwa njikwa ngwa ọrụ jikọtara ụfọdụ ndị na-egosi ọrụaka ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ka mma ịmalite. Wayzọ ọzọ ị ga-esi jiri ngwaọrụ ndị a mee ihe bụ ịme ihe na akaụntụ ngosi.
Na azụmaahịa azụmaahịa, ịmụ nyocha nke akụkọ ihe mere eme na eserese ọnụahịa nwere ike inyere gị aka ịkọ ọdịnihu na ọnọdụ nke ahịa ego. Ọ bụrụ n’inwee ahụmịhe na ahịa mgbe ụfọdụ ụfọdụ nyiwe nke ndị na-ere ahịa na-enye ndị ahịa nnukwu nhọrọ nke ọdịnaya agụmakwụkwọ na ngosi.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịzụ ahịa na ego ngosi na gburugburu ahịa ahịa ma wee si otú a - nweta oke mkpuchi na-enweghị ihe ize ndụ na isi obodo gị.
Ọrụ ndị ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke inwe ezigbo mmekọrịta onye na-azụ ahịa / ahịa. Ihe ikpeazu ichoro bu ulo ahia na oru adighi nma ma obu otu ndi n’adighi ike. Forex bụ ahịa 24/7 ka ọ dị mma, ịchọrọ ka ndị ọrụ ndị ahịa nweta 24/7 kwa.
Nhọrọ ndị ahịa na-emekarị bụ nkata ndụ, email, ụdị ịkpọtụrụ, na ekwentị. Inwe oke Ajuju Ajuju ajuju nwekwara ike inyere gi aka ma oburu na i no na ahia ahia.
Etu esi abanye na Forex Broker
Ugbu a ị marala ihe gbasara mgbochi Forex bụ ihe niile, yana usoro metrik iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa, ị nwere ike ịchọrọ ịmalite. Ọ bụrụ otu a, soro usoro ntụpụ aka akọwapụtara n'okpuru iji bido ọrụ ịgbalite ọrụ gị ugbu a!
Kwụpụ 1: Debanye aha na Broka
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-ere ahịa ị họọrọ, wee pịa bọtịnụ 'ntinye aka'.
A ga-achọ ka ị banye ọtụtụ ozi nkeonwe - dịka aha gị zuru ezu, adreesị ụlọ, ụbọchị ọmụmụ, adreesị ozi-e na akara ekwentị. Ga-ahọrọ aha njirimara na paswọọdụ siri ike.
Kwụpụ 2: Nyefee NJ gị
Dịka ọ bụla na-achịkwa usoro iwu (KYC), onye ọ bụla na-azụ ahịa azụmaahịa bara uru nnu ya ga-achọ otu akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala - iji gosi njirimara gị.
Na mgbakwunye na nke a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịchọrọ nọmba ụtụ isi nke mba gị na ụgwọ ọrụ enyere enyere n'ime ọnwa 3 gara aga. Ọzọkwa, ị ga-mkpa inye nkenke trading akụkọ ihe mere eme na ụfọdụ nkọwa banyere gị ego ọnọdụ.
Na-esote, ị ga-achọ itinye ego, ọ ga-abụkwa opekempe ego achọrọ n'elu ikpo okwu. Enwere ọtụtụ ụzọ nkwụnye ụgwọ dị ọtụtụ, yana dịka anyị kwurula, ọtụtụ n'ime ha bụ ozugbo, ma e wezụga nnyefe ụlọ akụ nke nwere ike iwe ọtụtụ ụbọchị.
Kwụpụ 4: Malite ka Ihu Forex / Gbalịa Akaụntụ Akaụntụ
Ọ bụ ya, ịbanye ugbu a na akaụntụ azụmaahịa Forex gị wee nwee ike ịmalite azụmaahịa. Ọbụna ma ọ bụrụ na i nweela ọtụtụ ahụmịhe azụmaahịa, ọ bụghị echiche ojoo ka ịmalite na akaụntụ ngosi. Nke a bụkarị ikpe ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ maka ịchụ ụlọ.
Ndị na-ere ahịa Forex kacha mma na-enye nkwụsị na 2021
Ugbu a, ị na-eji ikikere ezé na ihe ọ bụla ị ga-eme na hedge forex, naanị ị chọrọ ịchọta onye na-ere ahịa na-anabata usoro aghụghọ na ị nwere ike ịzụ ahịa.
Anyị edepụtarala ndị na-ere ahịa 5 kachasị mma ndị na-ahazi ma dabara nkọwa a, ha niile kwesịrị ịtụle.
eToro bụ otu n'ime usoro ntanetị kachasị ewu ewu na ntanetị n'ịntanetị. E nwere ọtụtụ puku akụ na ahịa ịhọrọ site na cryptocurrencies, commodities, indices, ETFs, ebuka na usoro Forex. Uzo a nwere otutu uzo abuo iji ahia, gunyere ezigbo umuaka umuaka, ndi isi na ndi ozo.
All Forex ụzọ abụọ nwere ike ahịa kpamkpam ọrụ-free. Na mgbakwunye na nke a, ịnwere ike ịtụ anya ịgbasa oke. Ọ dị oke mkpa ka ị cheta na ịkwesịrị ịkpachara anya maka ego ị ga-akwụ ụgwọ abalị, dịka ọ bụla ịzụ ahịa ọ bụla. Abịa n’elu ikpo okwu na ngwa eToro - ha pụtara oke. Ha abụọ dị mfe ịnyagharịa maka ndị ọrụ nke ọkwa ọkwa ọ bụla.
eToro na-enwu n'ezie ma a bịa na Forex, mana n'elu nke ahụ, ị ​​nwere ike ịzụ ahịa n'ụzọ zuru oke site na iji ọrụ 'oyiri ahịa' nke ikpo okwu. Na nkenke, nke a na-enye gị ohere ịhọrọ onye ahịa azụmaahịa nwere ahụmahụ site na narị otu narị ndị na-etinye ego na saịtị ahụ, yana 'detuo' pọtụfoliyo ha. Oge ọ bụla onye ahụ zụtara ma ọ bụ ree, ọ ga-egosipụta na pọtụfoliyo gị. Agbanyeghị na ọ ga-emetụta ego ole ị tinyere na 'onye ahịa azụmaahịa'.
Ọ bụrụ na ịnweghị n'aka ma ị dị njikere ịpụ ebe ahụ wee bido ịzụ ahịa ozugbo, ị nwere ike ịmalite na akaụntụ ngosi. eToro ga - enye gị $ 100,000 ego iji gwuo egwu, nke dị mma. Mgbe ịmalite ịzụ ahịa na ezigbo ego ị ga-achọ $ 200 opekempe ma enwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche. eToro nwere ikikere zuru oke site n'ọtụtụ usoro nchịkwa dị ka FCA na CySEC.
3. Capital.com - Nnukwu nke mmalite
Capital.com magburu onwe ya maka ndị ahịa ụdị ọkwa nke ahụmịhe n'ihi na ikpo okwu dị mfe ịnyagharịa. Izizi, ị nwere ebe nrụọrụ weebụ ejikọtara ọnụ, wee nwee nhọrọ nke nbudata ngwa Capital.com - ha abụọ dị ọcha ma nwee ọfụma.
Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ngwa iji dị ahịa site na onye na-ere ahịa a, ụlọ ọrụ ahụ na-enyere gị aka ijide Forex. Ihe kacha mma - ụlọ ọrụ a na-ebo ebubo ebubo ọrụ efu ma na-agbasa mgbasa ozi asọmpi. Ọbụghị naanị nke a, mana enweghị ụgwọ arụghị ọrụ ị ga-echegbu onwe gị banyere ya, ị ga - ekpebi ezumike n’ahịa. N'ezie, ọnụọgụ ego ole na ole na-echegbu onwe gị, ọ ka mma.
N'ihe banyere abụọ ụzọ abụọ, enwere ọtụtụ ịhọrọ ebe a, ị nwere ike bido ihe dị ka £ 20 ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ site na e-obere akpa ma ọ bụ debit / kaadị akwụmụgwọ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na ị kpebie itinye ego site na mbufe akụ, ị ga-etinye ego £ 250 opekempe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa na itinye ego ebe a ị nwere ike, mana, dị ka okpu ESMA, a na-enye oke n'akụkụ ihe karịrị 1:30 (na UK na Europe).
£ 20 nkwụnye ego
Commisson free trading na esika na-agbasa
Super ọrụ enyi na enyi n'elu ikpo okwu
Bank trasnfer min nkwụnye ego £ 250
4. AvaTrade - Top gosiri Social Trading Platform
Guzobe na 2006, AvaTrade bu onye ahia ahia nke oma nke nwere otutu ndi 200,000 n’elu iru ya. The ore ahia awade ọhụrụ ahịa na-edebe $ 100 ma ọ bụ karịa a 20% welcome bonus na Forex. a ga-akwụ ụgwọ ihe ruru $ 10,000 na iji tozuo maka oke uru, ịkwesịrị itinye $ 50,000 na akaụntụ gị.
Uzo a nwere otutu ihe di iche iche enyere ndi ahia, n'uwa di iche iche. Ọzọkwa, nke a brokerage bụ n'ezie vasatail. Can nwere ike ịnweta AvaTrade site na DupliTrade (ebe a na-ere ahịa), MT4 / 5 ma ọ bụ AvaOptions.
Ebe a na-ere ahịa na-akwado ikpo nke akụrụngwa, dị ka cryptocurrency na ngwaahịa CFDs, ma enwere ihe karịrị 50 ụzọ abụọ ego dị. Ihe niile ị chọrọ iji debanye aha ma malite ịmalite ịgbachi ụgwọ bụ £ 100 maka nkwụnye ego mbụ gị. AvaTrade na-ebo ebubo ụgwọ ọrụ efu ma na-enye ndị ahịa asọmpi na-agbasa.
N'adịghị ka ụfọdụ nyiwe ahia, saịtị a nwere njirimara njikwa ihe egwu yana ngwa nyocha teknụzụ. Ejiri ego na forex na 1: 30 ma enweghi oke ike na igbochi ma ọ bụ igwe eji arụ ọrụ ụgbọ ala. Dị ka ndị ọzọ na-ere ahịa na ndepụta anyị, AvaTrade na-achịkwa nke ọma. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ nwere ikikere site n'ọtụtụ ikike.
Uko na-agbasa site na 0.70 pips
Nyocha teknụzụ na njikwa njikwa ihe egwu
Ego adịghị arụ ọrụ bụ £ 50 kwa nkeji
5. EuropeFX - Nhọrọ nke Forex trading nyiwe
Dịka i chere aha EuropeFX, onye na-ere ahịa bụ ọkachamara na azụmaahịa Forex. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana onye na-ere ahịa na-enyekwa CFDs n'ụdị ngwaahịa, cryptocurrencies na mbak.
N'ihe banyere izu ike nke ojiji, ikpo okwu a na-enyere aka ịzụ ahịa site na MT4, yabụ ọ dị n'aka gị ma ịchọrọ ịnweta akaụntụ gị site na desktọọpụ gị, mobile ma ọ bụ mbadamba.
N'ebe a, ị ga - ahụ mgbasa dị oke ọnụ na ụdị ego abụọ yana nke a na - enye ikike zuru oke site na CySEC, yabụ na ị maara na ị na - emeso ụlọ ọrụ iwu. N'ezie, a na-ama ndị na-ere ahịa ama ama maka ịbụ ndị na-egosipụta oke nghọta ma a bịa n'ụgwọ.
Native n'elu ikpo okwu, tinyere MT4
Ikikere zuru oke
Super dị ala na-agbasa
100 admin ego mgbe ọnwa 12 arụghị ọrụ
Gaa EuropeFX Ugbu a
Okwu a 'gbara nzo gi', nke putara iguzogide ihe egwu gi, aburula na England kemgbe 1600s. Ruo taa, ndị ahịa na-eji ahịrịokwu ahụ na atụmatụ ahụ, eme ihe mgbe niile. O doro anya na ịghafe ihe na Forex anaghị abịa na-enweghị ihe egwu ya, mana ọ bụ ụzọ dị mma iji belata nfu ndị ahụ n'ahịa dị egwu.
Ugbu a ị maara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu esi agba oke Forex, ị nwere ike ịga chọta onwe gị ezigbo onye na-ere ahịa. Ihe ise anyị depụtara na ibe a bụ ndị isi na-achịkwa usoro iwu niile, nke pụtara na ozi nkeonwe gị dị mma ma jide ego gị na akaụntụ akụ ọzọ na nke ụlọ ọrụ azụmaahịa.
Gịnị ka hedging Forex pụtara?
Izu mkpuchi Forex bụ ụzọ isi belata ihe ize ndụ n'ọnọdụ ọnọdụ ego - yabụ na ọghọm ọ bụla na-atụ anya na azụmaahịa ndị ọzọ bara uru. Isi usoro uzo abuo a bu: iga ogologo ma ogologo na otu uzo, ma obu zuta itinye ihe ndi ozo ma oburu na onye ahia ahia na-ejide ogologo oge.
Enwere m ike ịme ihe mkpuchi ihu na akaụntụ ngosi?
Eeh. Ọ bụrụ na ị na-eji a n'elu ikpo okwu dị ka Skilling mgbe ahụ, a ga-enye gị ohere a ngosi akaụntụ eweta na-eme na tupu ị kụrụ ndụ ahịa.
Kedu ka m ga - esi mara ma onye na - ere ahịa azụmaahịa bụ ezigbo iwu?
Ikwesịrị ịdebanye aha na onye na-ere ahịa zuru ezu. Nke a bụ onye na-ere ahịa nke nwere ikikere site n'aka otu usoro iwu ma ọ bụ karịa. Ihe atụ gụnyere; na FCA, CYSEC, na ASIC wdg.Ọ bụrụ na ị ka na-echegbu onwe gị, lelee nọmba ikike na ikpo okwu ya na nke weebụsaịtị nke ndị ọrụ gọọmentị na-achịkwa.
Enwere m ike ịme ihe mgbochi Forex?
Eeh. Nnọọ mfe. Ihe ị ga - eme bụ ịbanye na onye na - ere ahịa na - enye ndị ahịa akara ngosi na - akwụghị ụgwọ.
Enwere m ike ijikwa Forex na ekwentị m?
Eeh. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-enye ngwa ahịa enyi na enyi, ma ọ bụ ụfọdụ oge ị nwere ike ibudata. Nwere ike itinye ma debe iwu azụmaahịa site n'ọbụ aka gị.